Ngo-2017 iBritani Ivulekile: IJordan i-Wildpiece Wild Ride
IJordan i-Spieth yazithatha kunye nabalandeli ngokukhwela kwinqanaba lokugqibela, kodwa ekugqibeleni wathi uClaret Jug ngamatyhuzu amathathu ngokugijima uMat Kuchar. Emva kwexesha elide, ukulula kwe-4-hole apho wayeneminyaka emi-5 ngaphantsi kwayo kwakuyintloko kwiSpies.
Umninimzi: IJordan i-Spieth, 268 (amanqaku apheleleyo apha ngezantsi)
Imihla: Julayi 20-23, 2017
Ikhosi yeGalofu: I- Royal Birkdale Golf Club
Inombolo ye-Championship evulekileyo: Le nguyesi-146 iBritish Open eyadlalwa.
I-Spieth yathatha i-2017 eBritish Open Open Leader
Uluhlu oluvulekileyo lwe-Spiety 65 lubophelele ukuba lukhokele phambili ngo-Kuchar no-Brooks Koepka. Kwaye kwathi uKoepka wehla ngokukhawuleza kwaye ekugqibeleni wagqiba ukuboshwa kwesihlanu, izibhozo ezisibhozo emva kokuphumelela, uSpieth kunye noKuchar balwa nalo lonke umdlalo.
I-Spieth ithatha i-solo iyakhokelela nge-69 kwi-Round 2; Kuchar ilandelwe kunye no-71. Kwinqanaba lesithathu, i-Spieth ibhadule 65. Kuchar? Wayeneminyaka engama-66, kwaye emva kwe-Round 3 i-Spieth ibambe i-3-stroke ehamba phambili ku-Kuchar.
Ubabalo usethe iNew Championship yokuBala iMidlalo kwiRekhodi yeThathu
UBranden Grace, owathi wagqiba phakathi kwabo baboshwe noKokaka kwindawo yesihlanu, wenza inqwaba enkulu ejikelezayo. Udubule u-8-ngaphantsi kwe-62, waba ngu-golfer wokuqala kwiimbali zamanqobana amagosa amagosa ukuze athathe amanqaku.
Amanqaku angama-63 kwinqanaba lamadoda labhalwa ngo- 1973 i-US Open . Ngoko kwathatha iminyaka engama-44 ukuba umntu aphule loo rekhodi. Kwaye uGrace wayeyindoda eyakwenza.
I-Wildpiece Wild Ride ne-Championship Push kwi-Round Round
I-Spieth, esele iphumelele i-2-time-win championship winner ( 2015 Masters kunye no- 2015 US Open ) iholele u-Kuchar ngamathathu ekungeneni kwinqanaba lokugqibela, kwaye loo mibini yayingenakucatshulwa kwinqanaba lokugqibela. Kwaye inkohliso inxeba ngokuphumelela ngaloo ndlela.
Kodwa kwakungelula kuye.
Umkhombe wabiza umgobo wokuvula. Emva koko waphinda wabuya ngeNombolo 3, kwaye kwakhona ngeNombolo 4. I-birdie yayilandelwa ngomhla wesihlanu, kodwa iSpieth yavala i-9 yangaphambili kunye nelinye i-bogey. Kuchar, okwangoku, uphendule ngisho-ngaphaya kweenqoma zokuqala ezilisithoba. Abagadi begalufu babemi ngelo xesha.
Kwimeko yeshumi le-13, ukuqhuma kweSpieth kwindlela, ngendlela eyiyo-waphoswa i-fairway ngokuqikelelwa kweyaridi ezili-100, kwafuneka athathe isigwebo esingeke sikwazi ukudlala, kwaye wadlala isigxina sakhe sesithathu kwindawo engama-4 kwi-Royal Birkdale .
Nangona i-Spieth iphosa ibhokhwe emgodini, yawa enye emva kweCharhar, inyaniso yokuba "yayisindise" into engenakuyilungele - yayingaba yimbi kakhulu - yayibonakala imvuselela.
Ngelo xesha uSpies waqalisa ukuqhuba kwakhe umqhudelwano: Wawunqanda uNombolo 14, wavuma uNombolo 15, waza wongeza i-birdies ngo-16 no-17. U-Kuchar wadlala ngokuzibetha kakuhle kunye ne-birdies, kodwa kwakungekho ngokwaneleyo ukuqhubeka kunye neChipi.
Ngomgca wokugqibela, uSpieth wayenempumelelo yakhe yesithathu kwinkokheli enkulu.
Imbali Yenzelwe i-Spieth
Umqhubi wokuqala weBritish Open win kunye nobungqina besithathu obunzima abuzange aphule nayiphi na irekhodi. Kodwa, iintsuku nje ezimbalwa ezinamahloni ekuzalwa kwakhe kweminyaka engama-24, uSpieth waba yintlonelo yesibhozo kwimbali ukuba aphumelele kwi -Masters , i- US Open kunye ne-British Open.
Ezinye ezisixhenxe? Zizo zonke iinqonga zomdlalo:
Umdlali wayeyinto yesibini-omncinci, emva koNicklaus, ukwenza njalo. Abahlanu balabagadi begalufu - uSarazen, uHogan, uNicklaus, uMdlali kunye noThuni-baqhubeka begqiba umsebenzi we-Grand Slam .
Iziphumo zokugqibela kwi-2017 eBritish Open
Nazi iziphumo zokugqibela ze-2017 eBritish Open edlalwa kwiRoyal Birkdale Golf Club (nge-70) eSouthport, eNgilani (i-amateur):
URory McIlroy 71-68-69-67--275
URafael Cabrera Bello 67-73-67-68--275
UMatewu Southgate 72-72-67-65--276
UMarc Leishman 69-76-66-65--276
UBranden Grace 70-74-62-70--276
UHenrik Stenson 69-73-65-70--277
UZach Johnson 75-66-71-66--278
UJason Dufner 73-71-66-68--278
UCharley Hoffman 67-73-72-67--279
URichard Bland 67-72-70-71--280
URichie Ramsay 68-70-70-72--280
UAron Baddeley 69-76-72-64--281
Usuku lweJason 69-76-65-71--281
URussell Henley 70-70-75-67--282
Canter Canter 70-72-72-68--282
UMartin Kaymer 72-72-70-68--282
USergio Garcia 73-69-68-72--282
UPeter Uihlein 72-72-69-70--283
UMatewu Fitzpatrick 69-73-68-73--283
JB Holmes 71-72-71-70--284
UJimmy Walker 72-72-70-70--284
Umthi weToby 70-75-69-70--284
UDustin Johnson 71-72-64-77--284
Wayengumdlali ophambili 68-73-70-74--285
UMichael Lorenzo-Vera 75-70-70-71--286
Young-han Ingoma 71-74-69-72--286
I-Alfie Plant 71-73-69-73--286
UShaun Norris 71-74-65-76--286
UJoseph Dean 72-72-70-73--287
UGary Woodland 70-69-74-74--287
UBernd Wiesberger 69-75-71-73--288
UDanny Willett 71-74-73-71--289
I-American Revolution: Yorktown & Ukunqoba
Isingeniso kwiComplex Inkcubeko yeLapita
Imbali Yembali Inkcazo: I-Academy, isiFrentshi
Abadlali abaphezulu aba-10 be-MLB baseMexico
Ma okanye iMyr? Indlela Esiyithetha Ngayo Ngexesha LeGiologic
Ziziphi iiNzululwazi zeNdalo kwaye abaChwepheshe bawasebenzisa njani?
I-Ford ye-Mustay ye-1966 ye-1962 + 2 Fastback
King Fahd Complex yokuprinta iQuran eNgcwele
Biography kunye neMisebenzi kaGeorge Herbert Mead